ओलीको चेतावनी- प्रचण्डजी ! ती दिन त गए, तपाईंसँग न हतियार न सेना – kalikadainik.com
ओलीको चेतावनी- प्रचण्डजी ! ती दिन त गए, तपाईंसँग न हतियार न सेना
मंगलबार, चैत्र १७, २०७७ | १६:५५:२६ |
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो उमेर र समयलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । पहिलेको जस्तो ह्याकुलाले मिचेर हिँड्ने शैली त्याग्न उनले प्रचण्डलाई सुझाव दिए ।
रिपार्टर्स क्लवको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा ओलीले नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने अदालतको फैसलाको बचाउ गर्ने क्रममा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘अदालते नमागेको न्याय दियो भन्नुभएको छ । तपाईंले नमागेको थियो होला, ऋषि कट्टेलले त मागेको थियो नि त । अर्काको नाममा पार्टी दर्ता गरेर ह्याकुलाले मिच्न खोज्ने ?’
ओलीले थपे, ‘उहाँहरूको मिच्ने बानी परेको क्या । जे गरे पनि हुने, विनाश गरे पनि हुने, लुटे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने । जुरो हल्लाको छ, हिँडेको छ । बानी बिग्रेको ।’
‘ती दिन गए प्रचण्ड जी, त्यो अब चल्दैन थ्यो । एउटा समय थियो ममात्रै बोल्थेँ । तपाईंका हतियार, लडाकुसँग डराउने समय थियो । तर, म नडराइ बोल्थेँ, लल्कार्थेँ । आज त तपाईंका कथित सेना पनि छैन । हतियार पनि छैन । ती दिन त गए त अब ।’
‘एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो । केटाहरुले छेलो फ्याँकेको देखेर यति जाबो डुंगा त म फुत्त फ्याक्दिन्छु भनेर अघि सर्नुभयो तर फुत्त फ्याँक्दा कम्मर सड्किएर ढल्नुभयो । उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनुभएन छ । प्रचण्डजीलाई पनि म उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु । उमेर सम्झिएर छेलो फ्याक्न नखोज्नुस, ढाड सड्किन्छ । त्यो जमाना गयो । समय यस्तो चिज हो त्यो फर्केर आउँदै, आउँदैन । अगाडिमात्रै जान्छ ।’